Brezila: “Tsunami” tao amin’ireo tanàna mahantra indrindra any Avaratra-Atsinanana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Janoary 2020 4:25 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Português, Deutsch, Français, 简体中文, 繁體中文, srpski, македонски, 日本語, English
(Lahatsoratra Jiona 2010)
Farafahakeliny, 46 no maty ary an-jatony no tsy hita popoka nanomboka tamin'ny zoma 18 jiona 2010, izay no tarehimarika vonjimaika tamin'ny tondra-drano namely ireo fanjakana manodidina tao Alagoas sy Pernambouc, ao Avaratra-Atsinanan'i Brezila nandritra ny loza ara-tontolo iainana ratsy indrindra araka ny fitadidian'ny mponina eo an-toerana. Nomena anarana “tsunami any avaratra-atsinanana”, nampitahaina tamin'ireo loza voajanahary mitovy amin'izany tany Azia, tahaka ny tsunami tamin'ny taona 2004 tao amin'ny Ranomasimbe Indiana ny tondra-drano.
Olona 180.000 farafahakeliny no nafindra toerana noho ny voina, maro ireo nahita fialokalofana tany amin'ireo sekoly, fiangonana ary tany amin'ireo fianakaviana. Namoy ny zavatra rehetra avokoa ny ankamaroan'izy ireo ary miantehitra tanteraka amin'ny fanampiana maha-olona sisa ankehitriny. Mahatonga ireo olona ho noana sy marary ny fahataran'ny fahatongavan'ny fanampiana.
Mpanao gazety iray nandrakitra ny fotoana nisian'ny rano nanondraka ny tanàna tamin'ny Alarobia tao De Santana do Mundau, iray amin'ireo tanàna voakasika indrindra ao Alagoas. Nanatontosa ny fakàna ny horonantsary hatreny amin'ny tafon-tranony ilay mpisera YouTube TheWelligton1:
Rehefa very avokoa ny zava-drehetra, dia namoaka sary misy ireo faharavana manodidina azy i Teresa Aragão ary faly fa velon'aina soa aman-tsara taorian'ny loza voajanahary goavana indrindra tsy mbola fahitany hatramin'izay tao an-tanànany, Palmares (Pernambouc). Nampiasa ny bilaoginy ihany koa izy mba hanome vaovao eo an-toerana sy handrindra ireo fanomezana ho an'ireo mila izany indrindra indrindra ireo manana fahasembanana:
Ny loza voajanahary ratsy indrindra tsy mbola fahitako tao an-tanànako, tondra-drano goavana indrindra hatrizay ! Tsy manana na inona na inona intsony ny fianakaviako. Tsy manana fitafiana intsony izahay, tsy misy taratasy na fanafody. Misaotra an'Andriamanitra fa tsy misy aina nafoy tao anatin'ny fianakaviana. Lehibe dia lehibe ny fahakiviana, feno fotaka sy korontan-trano rava ny tanàna, mianjera sy milentika ny fiara… faharavana tanteraka.
Branquinha taorian'ny tondra-drano. Sary Marcelo Albuquerque, nahazoana alalana.
Araka ny filazan'i Gilvan Júnior, latsaka tao anatin'ny herinandro latsaka tao amin'ireo faritra voakasika ny orana tokony ho latsaka mandritra ny iray volana –mahazatra amin'ny vanin-taona mando ao Brezila ny volana jiona, saingy tsy nampoizina ny habetsaky ny orana tamin'ity:
Tany Maceió, renivohitr'i Alagoas, dia nantenaina ho orana 298,3 milimetatra (mm) no nirotsaka nandritra ny volana [jona], saingy 470.2 kosa ny omaly [22 jona]. Tany Recife, dia nisy orana 456,7 mm hatramin'ny androany maraina (23 jiona), raha 388.9 mm no nandrasana nandritra ny iray volana.
Saika potika tanteraka noho ny onjan-drano ireo tanàna kely, raha tondraka tanteraka kosa ireo vondrom-piarahamonina manontolo eny amoron'ny renirano Mundau sy Capibaribe, ao Alagoas sy Pernambuco. Nirodana ny tetezana ary dibo-drano ny arabe ka tapaka ny fifandraisan'ireo tanàna kely amin'izao tontolo izao; tsy misy herinaratra, tsy misy rano madio na telefonina any amin'ny ankamaroan'ny toerana voakasik'izany. Mamaritra ny sarin'ny faharavàna ny ao Alagoas [amin'ny teny paortiogey] sy ny toe-javatra any Branquinha, iray amin'ireo tanàna mahantra indrindra ao amin'ny firenena, rava mihoatra ny 90% ary tsy maintsy hatsangana indray any amin'ny toerana hafa:
Tany amin'ireo tanàna toa an'i Branquinha sy Quebrangulo kosa dia tsy nisy tranom-panjakana na dia iray aza tafajoro. Tsy misy toerana ara-pitsaboana, tsy misy tsena kely na farmasia afaka manome fanampiana vonjy taitra ho an'ny mponina. Tsy maintsy havaozina tanteraka indray ireo tanàna ireo, ary na dia ireo antontan-taratasy rehetra tany amin'ireo biraom-panjakana momba ny fisoratana anarana aza dia very.
“Araka ny tombatombana, dia 70% -n'ny tanànan'i Quebrangulo, 115 km miala ny renivohitr'i Alagoas, Maceió, no ravan'ny reniranon'i Paraíba tanteraka”. Sary Marcelo Albuquerque, nahazoana alalana.
Torovana tamin'ny tondradrano vaovao tamin'ny habeny tahaka izany tao amin'ny faritra efa tofoky ny fahantrana lalina ny tontolon'ny bilaogy, ary ny fahalalana fa tsy vokatry ny fepetra ara-toetr'andro irery ihany ilay loza fa noho ny fahapotehan'ny tontolo iainana ihany koa, izay nahatonga ny fahatezerana. Nanararaotra nandefa hafatra ho an'ny mpanao politika iray teo an-toerana niaro ny fandaharan'asa mampiady hevitra momba ny tontolo iainana i Alcides Faria:
Araka ny fantatsika rehetra, ny olana any Alagoas dia mifamatotra ihany koa amin'ny fitrandrahana ala sy ny tsy fahampian'ny [zavamaniry] hiarovana ny riandrano. Ilaina ny legioma eo amoron'ny farihy sy ny renirano mba hanakanana ny fihotsahan'ny tany sy hampihenana ny fiakaran'ny rano vetivety.
Làlana difotry ny rano ao Quebrangulo, Alagoas. Sary: Marcelo Albuquerque.
Bilaogera maro no namoaka vaovao amin'ny fomba hanampiana. Nipoitra ireo tambajotra firaisankina antserasera sy ivelan'ny tambajotra, tahaka ny SOS Alagoas, tranonkala iray mampiasa OpenStreetMaps mba hametrahana an-tsarintany ireo faritra tena voakasika ary hampitana vaovao momba ireo ivontoerana fanolorana fanomezana. Miara-miasa am-pahavitrihana ny bilaogera mba hikarakara hetsika bilaogy momba ny lohahevitra vonjy taitra sy hanentanana ny fomba fanampiana.
Décio Junior [amin'ny teny paortiogey] manoratra fa mampahatsiahy azy ny ny tsunami tany Indonezia sy ny horohorontany tany Haiti ireo sary ireo. Satria any amin'ny amboara eran-tany any Afrika Atsimo ny maso rehetra, dia miezaka ny hamerina ny saina amin'ny fanontaniana maika kokoa izy: :
Ho an'ny natiora, tsy misy fahasamihafana, tsy misy fiatoana (hiatus), tsy misy tsy fitoviana. Afaka namely an'i João na i John ny loza. Mahamenatra ny mamerimberina an'ity resaka ity, kanefa tsy maintsy mitady fomba handrisihana ireo mpandray anjara rehetra isika amin'ity firaisankina ho an'i Brezila ity.
Andao hiaraka, iray fo isika, iray firahalahiana. Mandrosoa, Brezila, vonjeo ny zanakao, vonjeo ireo rahalahinao.
Lalamby tapaka tamin'ny tondradrano tao Quebrangulo. Sary Marcelo Albuquerque, nahazoana alalana.
Taorian'ny andro vitsivitsy somary maina, dia toa mbola tsy vonona ny hifarana ny orana izay namely ny faritra. Raha ny filazan'ny serivisy meteorolojika nasionaly, dia mety hameno ny farihy sy ny renirano indray ireo orana mety hilatsaka afaka andro vitsy, ka ho sarotra ho an'ireo ekipa mpamonjy voina ny hiditra any amin'ireo faritra voakasika.
Ireo dia ampahany amin'ny Avaratra-Atsinanan'i Brezila, faritra rava noho ny fahantrana tena lalina ary miaritra haintany faratampony. Lasa loza miverimberina isan-taona ny tondra-drano anefa, tamin'ny volana Mey 2009, olona 44 farafahakeliny no namoy ny ainy ary 380.000 no tsy manan-kialofana tao amin'ireo faritra ireo.
Ny lahatsoratra Anglisy tany am-boalohany dia nohamarinin'i Marta Cooper.